ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ COVID-19 လျင်မြန်စွာပျံ့နှံ့မှုအတွက် အမေရိကန်တွင် တာဝန်ရှိဆုံးဖြစ်ကြောင်း သုတေသနအစီရင်ခံစာက ဖော်ပြ - Xinhua News Agency
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ COVID-19 ပျံ့နှံ့မှုအတွက် အမေရိကန်တွင် တာဝန်ရှိသည်ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် သုတေသနအစီရင်ခံစာကို ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။သတင်းအရင်းမြစ်များစွာမှ ရရှိသောအချက်အလက်များအရ အမေရိကန်သည် COVID-19 စတင်ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေအရှိဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှု လျင်မြန်စွာပျံ့နှံ့မှုအတွက် တာဝန်အရှိဆုံးနိုင်ငံလည်းဖြစ်ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်း၏ ရောဂါအပေါ်နိုင်ငံရေး ခြယ်လှယ်မှုသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကူးစက်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး ကြိုးပမ်းမှုများကို အထူးခက်ခဲစေခဲ့ပြီး စိန်ခေါ်မှု ဖြစ်စေခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာ၌ ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းအစီရင်ခံစာကို Intelligence & Alliance Think Tank (IATT) နှင့် Taihe Institute တို့မှ ပူးပေါင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ (Xinhua)
BEIJING, Dec. 24 (Xinhua) — A research report titled “U.S. Responsible for Global Spread of COVID-19” was released on Friday.
The report was jointly released by the Intelligence & Alliance Think Tank (IATT) and the Taihe Institute. ■
တရုတ်နိုင်ငံက RCEP အတွက် ပြင်ဆင်ထားကြောင်း စီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာနပြော
နှစ်ပေါင်း ၄၀ တွင် တရုတ်နိုင်ငံ ရှမန်အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဖွင့်လှစ်လိုက်သည့် ကဏ္ဍသစ်